Mat ho an'ny ankizy "Fotsy misy kintana volamena" - Moi Mili
Home > Mat ho an'ny ankizy "Fotsy misy kintana volamena"
Mat ho an'ny ankizy "Fotsy misy kintana volamena"
Ny tsimoka Moimili tany am-boalohany dia tafiditra ao anatin'ny seho "Golden Polka Dots". Misaotra azy, tena mahafinaritra ny tranolay ao an-dainay. Izy io dia toeram-pianarana fanabeazana kely ho an'ny ankizy kely. Ny akanjo vita amin'ny landihazo dia azo ovaina: ny fotsy fety miaraka amin'ny kintana volamena dia azo ovaina ho malefaka miloko, miankina amin'ny tianao. Noho ny fampifangaroana ny fotsy sy ny volamena, dia mifanaraka tsara amin'ny habakabaka fety izy io ary mety ho fanomezana amin'izao fotoana izao.